Jir-dhise guul darro ka xanaaqay oo dharbaaxi la riday garsoore: VIDEO
Jir dhise u dhashay dalkaasi Griiga oo lagu magacaabo Giannis Magos ayaa dharbaaxi la riday garsoore kaddib markii uu ka xanaaqay guul-darro soo wajahday. Tartanka lagaga guuleystay Mogos ayaa ahaa kan 2016 IFBB Diamond Cup.
by calanka —	November 30, 2016 —	Video
Madaxda caalamka iyo shacabka Cuba oo macsalaameeyay Fidel Castro: SAWIRRO
Waxaa xalay lagu soo gabo-gabeeyay caasimadda dalkaasi Cuba ee Havana munaasabad lagu macsalaameynayay madaxweynihii hore ee dalka Cuba Fidel Castro kaas oo maalmo ku geeriyooday dalka Cuba. Castro ayaa sagaashan sano jirsaday, waxaana munaasabadda ka qeyb galay madax ka kala socotay caalamka.
Guddiga doorashada oo cayimi waayay xilliga doorashada m/weynaha: VIDEO
Guddoomiyaha guddiga doorashada Omar Mohamed Abdulle oo shir jaraa`id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa warbaahinta u sheegi waayay xilliga rasmiga ah ee ay qabsoomeyso doorashada madaxweynaha iyo kan guddoomiyaha baarlamaanka. Laakiin waxa uu sheegay in aysan sanadkan dhaafeyn.
Mootoole ka bad-baaday shil halis badan balse ku dheceen wax lala yaabay: VIDEO
Dalkaasi Brasil waxaa ka dhacday dhacdo lala yaabay oo ay warbaahinta caalamka iyo tan gudaha dalkaasi ay aad hadal hayaan kaddib markii nin mootoole ah uu ka bad-baaday shil aad u halis badan balse ay ku dheceen wax lala yaabay.
by calanka —	November 29, 2016 —	Video
Dibi dabagadin gaaray gaari dad ka buuxaan
Dhacdo qosol badan ayaa waxaa ay ka dhacday dalkaasi Spain bishii July ee sanadkan kaddib markii dibi laga ciyaarayay uu dabagadin gaaray gaari ay dad ka buuxaan.
Daawo qaab-socodka Xaliimo ay kusoo gashay masraxa ee ay ku badisay: VIDEO
Gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo Xaliimo Aadan islamarkaana ah 19-jir ayaa tartanka quruxda dalka Mareykanka ee MISS USA kaga qeyb gashay sanadka xijaab, waxaana ay usoo gudubtay selmi finalka.
by calanka —	November 28, 2016 —	Video
Gabar soomaaliyeed oo tartanka quruxda Mareykanka kaga qeyb gashay xijaab: VIDEO
Nin xaaskiisa oo khiyaameysa ka daba diray diyaaradda wax basaasta: VIDEO
Dhacdo ka yaabisay baraha bulshada ayaa lasoo dhigay barta Youtube-ka kaddib markii nin Mareykan ah uu soo dhigay film xaaskiisa oo ninkale u dhuumaneysa, isagoona falkii uu ku kashifay u adeegsaday doyaaradda wax duubta ee loo yaqaan Drone-ka.
by calanka —	November 27, 2016 —	Video
Kabalyeeri makhaayadeed oo mar dhow daaqadda ka bixi raba: VIDEO
Waxaa mar dhow daaqadda ka baxaya shaqaalaha makhaayadaha iyo goobaha kale ee lagu cunteeyo kuwaas oo loo yaqaan “kabalyeeri”. Makhaayadaha caalamiga ah ayaa iminka bilaabay in ay adeegsadaan mashiino dalabaadka ka qaada macaamiisha, raashinkana u keena.
Haweeney umushay wiil eysan fileyn oo farxadeed lala yaabay: SAWIRRO
Lammaane horay u haystay gabar yar ayaa farxaddooda lala yaabay baraha bulshada kaddib markii ay hooyadu Kim Guiley umushay wiil aan xisaabtaba ugu jirin, iyadoona horay u diiday in ay ogaato balse ay u haysatay in ay siddo gabar.
by calanka —	November 26, 2016 —	Sawirro